Madaxweynaha Dowladda Puntland ka tacsi yadeeyey geerida ku timid Marxuun Suldaan Xasan Cali Jibriil – Radio Daljir
Madaxweynaha Dowladda Puntland ka tacsi yadeeyey geerida ku timid Marxuun Suldaan Xasan Cali Jibriil
Seteembar 21, 2018 10:19 b 0
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay tariikhdu tahay 21 Sep 2018 ka tacsi yadeeyey geerida ku timid Marxuun Suldaan Xasan Cali Jibriil.
Alle ha u naxariistee Marxuun Suldaan Xasan Cali Jibriil ayaa ku geeriyoodey magaalada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag, waxaana uu marxuumku kamid ahaa dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland ee jecel nabadda, ka shaqeeya horumarinta Puntland gaar ahaan gobolka Sanaag oo uu kasoo jeedey marxuumku.
Madaxweynaha Puntland ayaa geerida Marxuumka Suldaan Xasan Cali Jibriil uga tacsi yadeeyay shacabka reer Puntland, gaar ahaan shacabka gobolka Sanaag oo uu kamid ahaa dhaqanka gobolkaasi, Madaxweynaha Puntland ayaa Alle ‘SWC’ uga baryey marxuunka inuu denbigiisa dhaafo, qabrigana u waasiciyo samir iyo imaanna Alle kasiiyo dhamman ummadda Soomaaliyeed.
‘Innaa Lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, Waxaan ka tacsiyaynayaa geerida Alle haw naxariistee Suldaan Xasan Cali Jibriil, waxaan Alle u waydiinayaa inuu denbigiisa dhaafo, qabrigana u waasiciyo, kuna abaal mariyo Janatul fardawsa’ Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxaned Cali Gaas ayaa si gaara uga tacsiyeyey geerida Suldaan Xasan Cali Jibriil qaraabadii, eheladii, qaraabadii, xaasaskii iyo caruurtii uu ka tegey marxuumku.
‘Waxaan si gaar ah ugaga tacsiyaynayaa geerida marxuunka qaraabadii eheladii, xaasaskii iyo caruurtii uu kategey, marlabaad waxaan Alle u waydiinaynaa inuu denbigiisa dhaafo kuna abaal mariyo janooyinkiisa kuwa ugu wanaagsan’ ayuu yiri Madaxweynuhu.
MAANHADAL: Xaaladda Siyaasadeed ee dalka & khilaafka DFS iyo maamulada dalka (dhegayso)